Amasayithi e-Austrian Online Casino - Amakhodi Ebhonasi Yekhasino aku-inthanethi
(500 amavoti, isilinganiso: 5.00 out of 5)
Iyalayisha ... Ukugembula e-Austria kusemthethweni impela. Ngaphezu kwalokho, sekuyiminyaka eminingi ukugembula kungumthombo oyinhloko wezimali ezweni. Zonke izinhlobo zokugembula e-Austria zilawulwa yi-Federal Ministry of Finance (Bundesministerium für Finanzen). Namuhla, kunamakhasino ayi-12 asemhlabeni. Izivakashi zinikezwa imidlalo ehlukahlukene, kufaka phakathi i-roulette, i-poker, i-blackjack, imishini ye-slot ene-jackpot eqhubekayo nokunye ukuzijabulisa kokugembula.
Isikhungo sokugembula esidume kakhulu e-Austria yiCasino, etholakala ekwakhiweni kwehhotela iGrand Hotel de l'Europe. Ihhotela ngokwalo lakhiwa ngo-1907, nendlu yokugembula lapho ivulelwa umphakathi kusukela ngo-1984 futhi inendawo engamamitha-skwele angama-600. Njengoba i-Austria iyindawo ethandwayo phakathi kwezivakashi, amakhasino amaningi akhiwe eduze kwamahhotela. Qaphela ukuthi izindlu zemidlalo kuleli azisebenzi ubusuku nemini. Zivulekele izivakashi kusuka ngo-18: 00 noma ngo-19: 00.
Ukugembula oku-intanethi ku-Austria
Ukugembula nge-inthanethi kunomlando omude kuleli. Amanye amasayithi wokugembula online e-Austria eYurophu aphakathi kwezinzuzo kakhulu, yize indlunkulu yawo ingekho endaweni yezwe, njengeChannel Islands. Qaphela i-Austrian online casino Bvin (Bwin), enelayisense emazweni amaningi emhlabeni jikelele.
Imithetho yokugembula ku-inthanethi e-Austria futhi ikuvumela ukuthi unikeze amalayisense kwezinye izinkampani ezisezweni, inhloso yazo - ukwethulwa kwezingosi ezintsha zokugembula online. Kodwa-ke, kunombandela owodwa - lawa mawebhusayithi enziwa kuphela ngabagembuli bendawo. Ngasikhathi sinye ayikho imikhawulo odabeni lomdlalo ezingxenyeni zamazwe omhlaba, i-Austria kanye nabantu bangasebenzisa ngokukhululekile izinsizakalo zamasayithi angaphandle
Amasayithi e-casino e-inthanethi avuma abadlali base-Austria
Bona uhlu lwamasayithi ekhasino aku-inthanethi amukela abadlali abavela e-Austria, futhi anikele ngemidlalo esezingeni eliphakeme nephephile. Lapha uzothola ukuzijabulisa okuhlukahlukene kusuka kumishini ye-slot kuya kumageyimu wekhasino bukhoma kusuka kubathengisi besoftware abadumile abanjengoNetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, nabanye abaningi. Ungafunda futhi nokubuyekezwa kwethu kwamasayithi ekhasino aku-inthanethi, ukuze wazi ukukhushulwa okungcono kakhulu okuku-inthanethi, amabhonasi nezinketho zokukhokha ezitholakala kubadlali abavela e-Austria.
I-Alps eboshelwe iqhwa, amachibi acwebile namaswidi amnandi e-mozartkugel ane-marzipan - konke lokhu nokunye okuningi luphawu lwase-Austria. Ukuthi leli zwe CasinoToplists vakashela nawe namuhla ukuze uthole amakhasino amahle kakhulu namaqembu wokudlala.
Umlando omncane nomlando we-Austria;
I-Austria - amakhasino nokugembula kuleli zwe:
Amakhasino asekelwe emhlabathini avunyelwe, angama-12, kukhona nemikhumbi nekhasino ebhodini;
Ngaphambi kwamakhompiyutha e-inthanethi opharetha angaphandle avinjiwe manje banqatshelwe ukuvinjelwa
Kukhona ama-casino operators ase-intanethi angakini.
Amakhasino adumile kakhulu emhlabeni ase-Austria;
Indawo yase-Austria nomlando omfushane womlando
Uhulumeni waseFederal kanye kanye neRiphabhuliki yasephalamende igama elisemthethweni leRiphabhlikhi yase-Austria. Ukukhulunywa ngakho okokuqala kusuka ngonyaka ka-996 AD i-Austria isenkabeni yeYurophu. Umlando wezwe uxhunyaniswe kakhulu nezwe laseJalimane laseBavaria - ngo-1156 kuphela, i-republic yazimela. Ngesinye isikhathi kuleli zwe kwakuthathwa iCzech Republic, iCroatia neHungary, ngaphezu kwalokho kwakunzima kakhulu ukuba nobudlelwano neTurkey, iFrance kanye neGermany. Inhlokodolobha yezwe idolobha laseVienna. Ngemuva kokuphela kwempi yezwe yesibili i-Austria njengoba iJalimane yahlukaniswa yaba izingxenye ezi-4.
Amakhasino Nokugembula eVienna
Ilayisense yokuqala yokwakhiwa kwekhasino yakhishwa ngo-1922, futhi indawo yokuqala yokugembula yashicilelwa eSalzburg. Kusukela lapho, kuye kwageleza amanzi amaningi, kepha kunento eyodwa ehlala ifana - kuvunyelwe ikhasino e-Austria. Ingabe inhlangano enkulu kunazo zonke "yamaCasino Austria", isebenza ngamakhasino ayi-12 futhi ifaka ezinye izinhlangano ngokomthetho wokubamba.
Ngakho-ke inkampani "Amakhasino e-Austria International" yaziwa kude kakhulu nemingcele yezwe labo: inamagatsha ezifundazweni eziyi-15 futhi njengamanje ingaphansi kwamakhasino angama-57. Ngaphezu kwalokho, inkampani yathuthukisa umkhakha onenzuzo enkulu webhizinisi lokugembula: imikhumbi enamakhasino ebhodini. Isibalo sabo sisondela ngokushesha kumaka we-100.
Lesi simo sengqondo sikahulumeni mayelana nokugembula siletha imali ebalulekile ezigidigidi zama euro.
Amakhasino adume kakhulu e-Austria
I-Bad Gastein - idolobha eliseningizimu yeSalzburg
Kuleli dolobha kunenye yamakhasino kanokusho hhayi e-Austria kuphela, kodwa naseYurophu yonke. Itholakala ekwakhiweni kweGrand Hotel de l'Europe, eyakhiwe ekuqaleni kwekhulu lama-XX. Imvamisa sebenzisa ikhasino ngokugcwele kusukela ngo-19: 00, futhi bonke abafisa ukuyivakashela kuyadingeka ukuthi banake ikhodi yokugqoka - amasudi ezemidlalo nezikhindi azemukelekile lapha. Ngaye udinga ukuthi ube nomazisi. Into esemqoka - ubukhona bezithombe zakho, nobudala obudala kuneminyaka eyi-18. Ithikithi lokungena libiza ama-euro angama-23, ubathola ngamathokheni afakwe ku-Euro 25.
Kuleli dolobha, ikhasino «iCasino Salzburg» itholakala kulesi sigodlo saseSchloss Klessheim, esakhiwe ngesitayela se-rococo esivusa ingqondo, lokho kukodwa kungukuheha. Le ndawo ayigcini nje ngokuthola ubuhle bendawo abazoyishutha. Ukungena ekhasino okukhokhelwe, inani laso lixhomeke esikhathini nemicimbi eyenzeka esigodlweni. Kungaba izinhlangano zemidlalo yeshashalazi noma abaculi.
Idolobha lezokungcebeleka laseVelden libuye lidume ngamakhasino alo, akhiwa emuva ngo-1950. Kodwa njengoba labo abafisa ukubamba umsila weFortune minyaka yonke beya ngokuya ngokuya ngokwanda, isakhiwo sekhasino sandiswa. Lesi sakhiwo esisha, esavulwa ngonyaka we-1989, sikwazi ukuthatha izivakashi ezingama-4,000 futhi asingesihle kangako. Kukhona indawo yokudlela, i-bistro, ibha, ne-play ploschadka- ithala elingaphandle kwechibi elihle kakhulu. Ngokufanelekile ingenye yamakhasino athandwa kakhulu futhi anamuhla eYurophu.
IVienna Opera. Indawo: I-Vienna, i-Opernring, i-2. I-Austria iyaziqhenya ngobuhlakani bomculo - iMozart, ngakho-ke ukuvakashela i- "Vienna Opera" kuphoqelekile ukuthi kufakwe ohlwini lwezinto ezikhangayo zokubukwa;
Indlu kaHundertwasser. Indawo: Vienna, Untere Weissgerberstrasse, 13. Kuleli kheli uzothola esinye sezakhiwo ezibabazekayo e-Austria.
ISigmund Freud Museum. Indawo: Vienna, Berggasse, 19. Qiniseka ukuthi uvakashela imnyuziyamu kasosayensi odumile. Lapho uzotshelwa hhayi kuphela ngempilo kepha nangendlela yokusebenza kwengqondo. Ukwakhiwa kwe-psychoanalyst enkulu kwahlala cishe iminyaka engama-47.
IVienna Woods. Indawo: eVienna, eWienerwald. Ukhathele imigwaqo ematasa yaseVienna, ungahlala uphumule engadini enhle yasedolobheni.
Imyuziyamu "Umlando Wezobuciko". Ikheli: I-Burgring 5. Lapha ukubuka kwakho kuzovela imidwebo yoqobo yamakhosi anjengoTitian, Raphael, Vermeer nabanye ababhali, kanye nezithombe ezibaziweyo nezinto zobuciko ezahlukahlukene.
Amaqiniso anentshisekelo mayelana ne-Austria nama-Austrian
Isibalo sabantu abangu-8, abantu abayizigidi ezingu-4, i-90% ikhuluma isiJalimane;
Ngenxa yokufana kwamagama, kwakuvame ukudida i-Austria ne-Australia. Ngakho-ke, kuyizikhumbuzo ezithandwa kakhulu "i-Austria: awekho ama-kangaroo";
Yilona kuphela izwe okhethweni lwakwenza izakhamizi zenze iminyaka engu-19, esikhundleni se-18;
ILake Gruner ifihla ipaki langempela - ebusika kungamamitha ayi-1-2 kuphela ukujula, kepha ngemuva kwezikhukhula zokuncibilika kwamanzi ukujula kuba ngamamitha ayi-12;
E-Austria, njengaseJalimane, ku-sauna, amadoda nabesifazane bageza egumbini elilodwa;
Ingxenye engaphezu kwesigamu samadoda wesilisa e-Austria ayinamandla kakhulu;
Leli lizwe akuyona nje i-Mozart kodwa futhi nguHaydn, Schubert, Liszt, Strauss, Mahler, uBruckner.
Austria ebalazweni laseYurophu
0.1 Ukugembula oku-intanethi ku-Austria
0.2 Uhlu Top 10 Austrian Online Casino Amasayithi
2.1 Amasayithi e-casino e-inthanethi avuma abadlali base-Austria
3 Ukugembula e-Austria
3.0.1 Indawo yase-Austria nomlando omfushane womlando
3.1 Amakhasino Nokugembula eVienna
3.1.1 Amakhasino adume kakhulu e-Austria
3.1.1.1 I-Bad Gastein - idolobha eliseningizimu yeSalzburg
3.1.3 Vienna ezikhangayo
3.1.4 Amaqiniso anentshisekelo mayelana ne-Austria nama-Austrian
3.1.5 Austria ebalazweni laseYurophu